News Collection: छविको सिनेमामा रेखाको सम्भावना कम !
छविको सिनेमामा रेखाको सम्भावना कम !
निर्माता छविराज ओझा र नायिका रेखा थापाको डिभोर्सको हल्ला बजारमा जति चलिरहेको छ, यति नै चर्चा अहिले छविले बनाउन लागेको नयाँ सिनेमाको बारेमा पनि हुन थालेको छ । सिनेमा कस्तो बन्छ भनेर होइन, कलाकार को हुन्छन् भनेर । यो सिनेमाको हाल कथा लेखनको काम भैरहेको छ । सिनेमालाई सविर श्रेष्ठले निर्देशन गर्ने पक्का भैसकेको छ । यो सिनेमाको छायांकन जेठको पहिलो साताबाट सुरु हुने पक्का समेत भैसकेको छ । यो सिनेमामा रेखा थापा नायिकाको रुपमा नहुने कुराहरु पनि नआएका होईनन् ।
यतिमात्र होईन, निर्माता छविराज ओझाले आफैंले सिनेमा क्षेत्रमा भित्र्याएका आर्यनलाई नायकको रुपमा लिन सक्ने संकेत समेत दिएको खवर आएको थियो ।यस्ता खबर सार्वजनिक भैरहेको बेला रेखा थापा, छविको सिनेमामा नायिकाको रुपमा नहुने सम्भावना देखिएको छ । हुन त यसबारे छवि र सविर दुवैले केही पनि बोल्न चाहेनन् । कलाकार पक्का भैनसकेपनि निर्माता छवि ओझाले रेखा हुने र नहुने बारेमा केही पनि बोलेनन् ।
‘रेखा फिल्मस्ले बनाउन लागेको सिनेमामा रेखा नहुने कुरा हुन्छ र’ सविरले प्रतिक्रिया दिए । तर छविले भने यसबारे केही पनि नवोल्नु आफैमा अचम्मको कुरा छ । किनकी अरु वेलामा रेखा त आफ्नै घरको हिरोईन हो नयाँ किन लिनु भन्दै आएका छविले अनलाइनखवरको प्रश्नमा यसबारे केही पनि नबोल्नुले रेखा छविको नयाँ प्रोजेक्टमा हुने नहुने कुरामा शंका व्यक्त गर्न सकिन्छ ।यतिमात्र होईन छविको सिनेमा निर्देशक सविरले भनेजस्तै जेठको ३ गतेबाट छायांकनमा गयो भने रेखा यो सिनेमामा नायिका नहुने पक्का छ । किनकी वैशाख २० गतेबाट निर्देशक शोभित बस्नेत आफ्नो चलचित्र जाउँ हिँड पोखराको छायांकनमा जाने तयारी गरिरहेका छन् । यो सिनेमाभित्र नायिका रेखा थापा मुख्य कलाकारको रुपमा रहेकी छिन् । रेखाले शोभितको सिनेमा सुरु गरेको ४५ दिनसम्म अन्य सिनेमाका लागि समय दिन नपाउने सहमति गरेकी छिन् ।
यसैले पनि रेखा जेठ ३ गतेबाट सुरु हुन लागेको छविको सिनेमा खेल्न असमर्थ हुने पक्का छ । यो कुरालाई छविले केही दिन अघि एक संचारमाध्यममा दिएको अन्तर्वार्ताले पनि पुष्टि गर्छ । छविले यदि रेखा अन्य सिनेमाको छायांकनमा व्यस्त भइन् भने उनलाई नै कुरेर बस्ने कुरा पनि आउँदैन भनेर बोलेका थिए ।यसबाट पनि रेखा छविले बनाउन लागेको नयाँ सिनेमामा नायिका नहुने कुरामा शंका व्यक्त गर्न सकिन्छ । रेखा र छविबीचको डिभोर्सको हल्ला बाहिर आइरहनु र अर्कोतिर रेखालाई आफ्नो सिनेमाका लागि नकुर्ने छनक छविले दिनुले पनि यी दुई बीचको सम्वन्ध पक्कै पनि राम्रो छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । हेरौं यो घटना कसरी अघि बढ्ने हो ?